Islaam Naceybka: Ilhaan Cumar oo madaxweyne Biden ka codsatay arrin ku saabsan Muslimiinta | Biyoguurenews.com
Home Wararka Islaam Naceybka: Ilhaan Cumar oo madaxweyne Biden ka codsatay arrin ku saabsan...
Islaam Naceybka: Ilhaan Cumar oo madaxweyne Biden ka codsatay arrin ku saabsan Muslimiinta
Ilhaan Cumar, oo gobolka Minnesota u matasha Aqalka Wakiillada Mareykanka (Congress), ayaa hoggaaminaysa koox u ololeyneysa in maamulka Joe Biden uu abuuro gole qaabilsan la dagaallanka Islaam-naceybka.
Gabadhan ka tirsan xisbiga talada haya ee Dimiqraaddiga, ayaa arrintan la kaashanaysa xildhibaanno kale oo ay isku xisbi yihiin.
Ilhan iyo kooxdeeda ayaa ugu baaqay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Antony Blinken inuu yagleelo xafiis gaar ah oo ka shaqeeya howshaas, xilli dembiyada la xiriira Islaam naceybka ay kusii fidayaan caalamka.
Farriin ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay Ilhaan Cumar ku tiri: “Waa in aan ku baraarugnaa Islaam naceybka, waana in aan sameyno wixii karaankeenna ah si aan u cirib-tirno.”
“Arrintaas waa in ay qayb ka noqoto dedaalka aan u sameyno raadinta xorriyadda dhinaca diimaha ee caalamka iyo xuquuqda aadanaha.”
“Waxaan aragnaa inuu sare u kacay Islaam naceybka, uuna ka jiro meel walba oo ka mid ah dunida. Taas ayaa ah sababta aan u wadno warqad aan la kaashannay @RepSchakowsky, annagoo dalbaneyna in la sameeyo xafiis gaar ah oo la tacaala Islaam naceybka,” ayey soo qortay.
We are seeing a rise in anti-Muslim hate in nearly every corner of the globe. That’s why we are leading a letter with @RepSchakowsky calling for a special envoy to combat Islamophobia.
Warqadda loo diray Blinken ayay Ilhaan Cumar iyo 23 xildhibaan oo kale oo ka tirsan xisbiga Dimuqrdaaddiga ku codsadeen in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay ku sameyso Hay’ad la mid ah midda ka shaqeysa la dagaallanka Yuhuud naceybka, sida uu shaaciyay wargayska Daily Mail.
“Waa la soo dhaafay waqtigii uu Mareykanka si adag ugu istaagi jiray taageerada xorriyadda diimaha kala duwan ee dhammaan dadka iyo in uu mudnaanta ay u qalanto uu siiyo dhibaatooyinka Islaam naceybka ah ee ka jira dunida,” ayaa ka mid ah qoraallada ku jira warqadda oo uu helay telefishinka CNN.
Sarkaal ka tirsan Aqalka Cad ayaa Talaadadii ku dhawaaqay in madaxweyne Biden uu dhawaan magacaabi doono qof ay shaqadiisu tahay inuu noqdo danjire si gaar ah ula socda islamarkaana la dagaallama arrimaha la xiriira Yuhuud naceybka.
Kooxda dimuqraddiga ee dhowr iyo labaatanka xildhibaan ka kooban ayaa codsigooda diray isla maalintaas gudaheeda.
Shir jaraa’id oo ay qabteen ayay ku sharraxeen sida ay degdeg ugu doonayaan in la tixgaliyo dalabkooda.
Xildhibaannadaas ayaa sidoo kale codsaday in Blinken uu sannad walba xogta dowladda ee xuquuqda bani’aadanka ku soo daro macluumaadka ku saabsan tacaddiyada dhinaca Islaam naceybka.
Ilhaan, oo ka mid ah saddexda xildhibaan ee Muslimiinta ah ee Aqalka Wakiillada, ayaa hor kacaysa dadaalkan, waxaana barbar taagan wakiilka matala gobolka Illinois, Jan Schakowsky.
Xildhibaannada kala ah Karen Bass, Judy Chu iyo Jim McGovern, ayaa sidoo kale saxiixay warqadda loo diray dowladda. Sidoo kale waxaa qayb ka ah Rashida Tlaib oo ah haweeneyda labaad ee Muslimka ah ee Aqalka Wakiillada ka tirsan.
Previous articleBERBERA Badhasaabka saaxil oo kahadlay waqtiga la shacin doono xareynta CV yada dhalinta shaqo
Next articleWaligay Isma Odhan Hargaysa Ayaad” Farxiya Cabsiye